Sina Conical fanamboarana extruder roa-baoritra Concrete | Jiarui
Ny extruder kambana conical kambana dia karazana masinina extruding fangaro mahomby. Ny fiasa amin'ny extruder toy izany dia toy izao: ny hafainganam-pandrefesana ambany, ny fitaovana sarotra simba, ny fifangaroana mitovy, ny kalitao milamina, ny fahaiza-manao ambony, ny fampiharana malalaka ary ny androm-piainana maharitra, sns. Raha miasa miaraka amin'ny visy sy mpanampy mety dia afaka mamoaka plastika thermoplastic mivantana izy io. , indrindra ny vovoka PVC henjana ho fantsona, tabilao, ravina, sarimihetsika na mombamomba azy, sns. Azo ampiasaina amin'ny fanovana plastika sy granulation vovoka koa izy io.
Ny extruder kambana kambana Conical dia karazana masinina extruding mix mahomby. Ny fiasa amin'ny extruder toy izany dia toy izao: ny hafainganam-pandrefesana ambany, ny fitaovana sarotra simba, ny fifangaroana mitovy, ny kalitao milamina, ny fahaiza-manao ambony, ny fampiharana malalaka ary ny androm-piainana maharitra, sns. Raha miasa miaraka amin'ny visy sy mpanampy mety dia afaka mamoaka plastika thermoplastic mivantana izy io. , indrindra ny vovoka PVC henjana ho fantsona, tabilao, ravina, sarimihetsika na mombamomba azy, sns. Azo ampiasaina amin'ny fanovana plastika sy granulation vovoka koa izy io.
Ny extruder dia raikitra amin'ny fiarovana ny lesoka, fanairana be loatra, rafitra fihodinan'ny menaka hafanana tsy tapaka, rafitra fanamafisam-peo menaka barika, fantsom-bovoka ary fitaovana fihinan-kanina.
Betsaka ny rafitra fanaraha-maso herinaratra azo isafidianana (ohatra: rafitra fanaraha-maso fiara PLC). Motera DC no mitondra azy. Amin'ny alàlan'ny inverter na DC regulator hafainganam-pandeha dia mety hahatratra ny fanitsiana hafainganam-pandeha tsy miovaova, avo lenta ary mitsitsy angovo. Ny maso avo roa heny fampirantiana mari-pana nomerika dia ampiasaina hanatsarana ny fanaraha-maso sy ny fiovaovan'ny toetr'andro.
Kodiarana extruder kambana conical kambana conical kambana extruder dia matetika misy visy barika, rafitra fandefasana fitaovana, famahanana be dia be, fantsona fantsona, fanafanana, fampangatsiahana ary fanaraha-maso herinaratra sns sns. .
Fitaovana manokana ho an'ny vovoka PVC na fitrandrahana vovoka WPC izany. Manana tombony amin'ny fampifangaroana tsara, fivoahana lehibe, fihazakazahana maharitra, androm-piainana maharitra. Miaraka amin'ny bobongolo samihafa sy ny fitaovana any ambany, afaka mamokatra fantsom-pifaninanana PVC, valindrihana PVC, mombamomba ny varavarankely PVC, ravina PVC, fametahana WPC, granules PVC sns.
Volom-borona isan-karazany, extruder visy roa misy visy roa, visy afovoany ihany no misy visy iray, ampiasaina amin'ny fitaovana samihafa izy ireo, extruder visy roa matetika ampiasaina amin'ny PVC mafy, visy tokana ampiasaina amin'ny PP / PE. Ny extruder amin'ny volo avo roa heny dia afaka mamokatra fantsona, profil ary granules PVC. Ary ny extruder tokana dia afaka mamokatra fantsona PP sy PE sy granules.
Ny extruder dia be mpampiasa amin'ireto faritra manaraka ireto:
Mety amin'ny PVC, vovoka UPVC
Fantsom-bokatra, lovia, ravina, profil ary koa granules
Haingam-pandeha mihodina (r / min)
Herin'aratra lehibe (KW)
Previous: Extruder visy tokana
Manaraka: Andalana famokarana pipa PVC